I-Dreame D9 Max, uhlalutyo lwamva nje lwerobhothi esebenza ngokuphezulu yokucoca ivacuum | Iindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 30/12/2021 10:59 | ngokubanzi, Reviews
Izicoci zerobhothi ziye zaba yenye yezona "kufuneka" kumakhaya aqhelaniswe kakhulu nobuchwepheshe bamva nje. Ezi ziye zafumana uphuhliso olubalulekileyo kunye nophuculo kwintsebenzo zombini kunye neziphumo eziye zajika zibe zizinto ezizimeleyo ezenza imini yethu ibe lula kakhulu.
Okwangoku Ndothuke ayinakuphoswa kukuqeshwa, inika inani elilungileyo lezisombululo ezinexabiso elihle lemali kolu luhlu lweemveliso zobuchwepheshe. Sihlalutya iDream D9 Max entsha, isicoci serobhothi esicoca ngokusebenza okuphezulu kunye neziphumo ezilungileyo, Fumana kunye nathi kwaye uya kuba nakho ukuvavanya ukuba kufanelekile ukuthenga kwakho, okanye hayi.
3 Ukuzimela kunye nokusetyenziswa
4 Itekhnoloji esetyenzisiweyo kunye noluvo lomhleli
Njengoko kusenzeka kwezinye iimeko kunye nezinye iimveliso zayo, iDream iphawula utshintsho kuyilo kunye nomgangatho wokwakhiwa kweemveliso zayo ngokubhekiselele kwabanye, iqinisekisa ukuba ixabiso elihlengahlengisiweyo alibonakali ngokomgangatho. Sijongene nerobhothi yokucoca i-vacuum enomlinganiselo oqhelekileyo wemarike, ukubheja kwimilinganiselo ye-35 × 9,6 eya kuhlala malunga ne-3,8Kg, Nangona kuyinyani ukuba imilinganiselo yobunzima kwezi zixhobo ayifanelekanga kakhulu, kuba asiyi kuzithwala. Ixabiso layo liya kujikeleza malunga ne-299 euro kwiindawo eziphambili zokuthengisa. Kwakhona ukuba ufuna isaphulelo esongezelelweyo ungasebenzisa ikhuphoni IPHUPHA9MAX.
Ubungakanani: 35 × 9,6 isentimitha
Ubunzima: 3,8 Kg
Imibala ekhoyo: Umnyama omenyezelayo kunye nomhlophe omenyezelayo
Ukucoca kunye nokukhuhla kudityanisiwe
Inebrashi esembindini eyomeleziweyo ezantsi edibanisa ubuchwephesha obahlukeneyo, kunye nebrashi yecala elinye. Phezulu sifumana amaqhosha amathathu olawulo aphambili, akudala ngoku "hump" inyuswe zizo zonke iirobhothi ezinobuchwepheshe belaser kunye nohlengahlengiso lwetanki yamanzi. Ngokwenxalenye yayo, itanki yokungcola ibekwe emva komnyango kwindawo ephezulu, apho zihlala zihlala kuzo zombini iRoborock kunye neDreame iimveliso rhoqo. Njengoko ubona kwiifoto, sihlalutye imodeli emnyama.
Ngokumalunga nokupakishwa, iDreame ihlala isebenza kakuhle eli candelo, ukubonelela ngesi sihlandlo izinto ezilula kodwa eziyimfuneko: Isixhobo, isiseko sokutshaja kunye nonikezelo lwamandla, ibrashi yecala, itanki yamanzi kunye ne-mop ifakiwe, isixhobo sokucoca (ngaphakathi kwirobhothi, apho itanki yokulahla inkunkuma) kunye nencwadana yemiyalelo. Ndiphoswe yinto yokutshintsha efana ne-mops eninzi, isihluzo sokubuyisela okanye ibrashi yecala yokubuyisela.
Isixhobo sinoqhagamshelwano Wifi kodwa njengoko kuqhele ukwenzeka kwezi zixhobo, kufuneka sikhumbule ukuba iya kuhambelana kuphela ngothungelwano lwe-2,4GHz. Oko kwathiwa, sifumana inkqubo ye-nLDS 3.0 Laser LiDAR Navigation esebenza kakuhle, eya kukhatshwa nguwe 570ml ichibi lokungcola kunye ne-270ml yamanzi okanye ukucoca ulwelo esifuna ukubonelela, nje ukuba iyahambelana zombini isixhobo kunye nomgangatho wethu ekuthethwa ngawo, into apho kufuneka udibane imiyalelo manual ngaphambili.
Ngokuphathelele amandla okufunxa, iDreme inika ingxelo ngale modeli ye-4000 yePascal pro, amandla aphezulu ngokufanelekileyo kwaye asebenzayo kuthathelwa ingqalelo uthelekiso kunye nezinye iimveliso zezona brand zixatyiswayo. Ukuthathela ingqalelo amandla okufunxa axeliweyo siya kufumana ingxolo ekhutshwayo ephakathi kwe-50db kunye ne-65db iyonke, eyenza ibe sisicoci sevacuum yerobhothi ethe cwaka ukuba sithathela ingqalelo eli candelo likhethekileyo. Ingxolo iya kuxhomekeka kunokuba kumanqanaba amane ahlukeneyo amandla esinokuwalawula ngokusebenzisa isicelo.
Ukuzimela kunye nokusetyenziswa
Cwangcisa iindlela ezilumkileyo
Yenza iimephu ezithile
Coca amagumbi athile
Coca iindawo ngokuthanda kwakho
Ukwalela ukufikelela kwiindawo ezithile
Sinayo, inokuba njani ngenye indlela, ungqamaniso kunye IAmazon Alexa, ke usuku nosuku luya kuba lula ukuba sibuza nje umncedisi wethu osemsebenzini. Umsebenzi wongqamaniso kunye nolawulo lwesixhobo uya kwenziwa ngesicelo seMi Home esifumanekayo zombini Android ukuba kunjalo iOS. Uya kusebenza naxa singekho ekhaya. Enkosi Ku I-smartphone yethu kunye neApp yethu, sinokulawula ukucocwa kwekhaya naphi na, ukufikelela kwimephu kunye nokulawula iindawo zokucoca.
Itekhnoloji esetyenzisiweyo kunye noluvo lomhleli
Sidibana eDreme D9 max itekhnoloji ephambili eyenzelwe iDream kwezi ntlobo zeemveliso, ezinje nge inkqubo yokulawula ukufuma ukulawula amanzi asetyenziselwa ukucoca kwaye angonakalisi i-parquet, kunye nenkqubo yokufunxa ehlakaniphile Ukunyusa ikhaphethi oko kuya kwahlula iikhaphethi ukusuka kumgangatho oqinileyo ukulawula ukuqina kwesicoci sevacuum.
Ibandakanya isihluzo esiphezulu se-HEPA.
Amava ethu abe mahle kakhulu malunga nokucoca, ngamandla, ngaphandle kwengxolo kunye neendlela ezilungileyo eziyilwe ngeskena se-LiDAR, njengesiqhelo, ukukhuhla kungaphezulu kwe-mop emanzi ukuba kwiimeko ezithile kunokudala amanqaku okufuma emgangathweni ngokuxhomekeka izinto eziqulunqayo, ngoko sincoma ukubonisana nomenzi. Ungayifumana ngexabiso eliya kususela kwii-euro ezingama-299 kunye nezibonelelo ezithile, ube lukhetho oluhlakaniphileyo ngokomgangatho walo / umyinge wexabiso.
Ithunyelwe nge: I-30 ngoDisemba 2021
Utshintsho lokugqibela: 4 de enero de 2022
Imephu ehlakaniphile kunye nokusebenza okuphezulu
Amandla okutsala afanelekileyo
Ingxolo ephantsi kunye neziphumo ezilungileyo
Ukukhuhla ngamanye amaxesha kushiya amanqaku
Kulahlekile ukuba zibandakanya izinto ezongezelelweyo zokubuyisela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Dreame D9 Max, uhlalutyo lwesicoci sokutshayela irobhothi esisebenza kakhulu